Boka WEB nohazavaina tamin'ny Semalt Islamabad Expert
Ho an'ny ankamaroan'ny tranokalan'ny tranonkala eCommerce, ny fitantanana ny Search Engine Bots dia iray amin'ireo lafiny manan-danja indrindra amin'ny dikan-teny nomerika . Ohatra, ny olona dia mampiasa taktika toy ny milina fikarohana ho fitantanana sy fanaraha-maso ny mpitsidika ao amin'ireo toerana. Ireo botsika ireo dia mitsidika tranokala ary mitsidika ny fampahalalana hita ao amin'ny tranonkala. Ny ankamaroan'ny mpitsikilo mpikaroka dia miasa amin'ny loharano hita ato amin'ity boky SEO ity, izay nomen'i Michael Brown, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt .
Mba hampisehoana ny votoatin'ny tranonkala ankapobeny, ny botsaka atolotra amin'ny tambajotra finday manontolo dia miasa mifanaraka amin'ny "htacccess.file" hita ao amin'ny tranokalan'ny tranonkala. Ho an'ny olona manana tranokala eCommerce samihafa, misy fotoana maromaro ahafahan'ny orinasa hanatsara ny fepetra samihafa ho fampifanarahana ny anjara asan'ny Boky Search Engine.
Mba hampidirana votoatim-pejy hita ao amin'ny tranokala, dia mitady fomba hitsidika ny tranokalanao ny fitaovam-pikarohana. Ireo mpitsikilo amin'ny tranonkala dia manana hery ahafahana mankany amin'ny tranonkala iray ary mandanjalanja ny votoatin'ny tranonkala manontolo. Na izany aza, ny boot-n'ny fikarohana dia manana fahaizana.
Ny fomba fiasa asa bots
Manao fikarohana finday toy ny programa fandinganana tsotra. Maro ny olona mety hanontany tena hoe inona no atao hoe spider sy ny fomba fiasan'ireto mpitsikilovana ireto..Ohatra, ny botsika dia afaka mamaky sy misintona fampahalalana be dia be any amin'ny tambajotra fikarohana mandritra ny fotoana maharitra. Toy izany koa, manampy azy ireo amin'ny famoronana ny lisitry ny milina fikarohana, izay ahafahan'ny mpanjifan-tserasera samirery ny SERPs.
Ilaina ny manatsara ny tranonkalanao mba hahazoana valiny fikarohana betsaka araka izay tratra. Ohatra, napetrak'ireo olona robots.txt ny tranokalan'ny fakana an-tserasera. Isaky ny mitsidika ny tranokalanao ireo bots ireo, dia mitady an'io rakitra io ho an'ny tanjon'ny fanoratana. Avy eo izy ireo dia nanangona vaovao izay manampy amin'ny tambajotra finday. Rehefa vita io dingana io, dia azo alaina ho an'ny olona ny fikarohana sy ny fikarohana.
Amin'ny tranga sasany dia mety tsy afaka mahita ny tranonkala ny Search Engine Bots. Amin'ity tranga ity, mety manana ampahany izay mety tsy misy ny fanondroana ny tranokalanao. Io trangan-javatra io dia mety hahatonga ny tranonkala ho very ny fikarohana karazam-pikarohana.
Miankina amin'ny karazana fikarohana hita avy amin'ny fikarohan-dry zareo ny milina fikarohana. Ohatra, rehefa tranokalan'ny tranonkala vaovao ny fisiahana, ny tranonkalan'ny fikarohana dia tsy maintsy mahita ny fampahalalana rehetra azony atao amin'ny fampidirana azy. Fitsipika maromaro hita ao amin'ny rakitra robots.txt manampy azy amin'ny famonoana azy. Avy amin'ny tahirin-tsolitany, ny vohikala fikarohana dia afaka mamorona asa maro samihafa ary mitondra valiny fikarohana maro ho an'ny teny fanalahidy samihafa.
Maro ny tranokala eCommerce no mahazo tombony amin'ny fahazoana tetik'ady ara-barotra amin'ny Internet. Ohatra, manatsara ny tranokalany ny olona amin'ny fampidirana ny tambajotra fitadiavana tahaka an'i Google. Search Engine Bots manampy amin'ny fanatanterahana ny tranonkala isan-karazany-mpampiasa izay ny ankamaroany dia mahafaoka ny tenanao manokana. Ankoatra izany, ny olona dia mbola mahazo tombony amin'ny famelana ny endriky ny fikikisana amin'ny vohikalany sy ny lafiny hafa amin'ny marketing dizitaly. Ity lahatsoratra SEO ity dia afaka mampianatra anao hoe inona ny tambajotra fisakafoanana sy ny fomba hahatratrarana ireo mpikirakira an'ity tranonkala ity. Azonao atao ihany koa ny mahafantatra ny tranonkala fikarohana momba ny tranokala mampiasa ny fampahalalana avy amin'ny bots mba hamoronana angona SERP Source .